Lafta Gareen oo shaaciyey arrin lama filaan ku noqotay xildhibaano badan | Xaysimo
Home War Lafta Gareen oo shaaciyey arrin lama filaan ku noqotay xildhibaano badan
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) oo ka qeyb-galay munaasabad xalay ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday xildhibaanada baarlamaanka, siiba kuwa ka soo jeeda maamulkaasi.
Lafta Gareen ayaa shaaciyey in xildhibaanada qaar looga xaq lahaa kuraasta ay ku fadhiyaan ee baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaan ay jiraan dad u soo dhintay oo mudan in lagu qadariyo ehelladooda, sida uu hadlka u dhigay.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ma carab baabin kuraastaasi, balse wuxuu tilmaamay in xildhibaan kasta laga doonayo inuu xushmeeyo ehelka dadkii u dhintay arrimaha siyaasadeed.
“Kuraastaan qaarkood dadka u fadhiga waa looga xaq leeyahay, dad baa u dhintay, waa in la qadariyo laguna xushmeeyo ehelkooda, xitaa waxa aan heynaa in kuraasta qaarkood in xaq weyn ku leeyihiin dad nool, nin waliba waa in lagu ixtiraamo waxa uu ahaa.” ayuu yiri Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen).